रेणु दाहाललाई भोट माग्न कमेडियन सन्दिप क्षेत्रीले ‘डेढ करोड’ लिएको आरोप ! – Annapurna Post News
रेणु दाहाललाई भोट माग्न कमेडियन सन्दिप क्षेत्रीले ‘डेढ करोड’ लिएको आरोप !
May 10, 2022 sujaLeaveaComment on रेणु दाहाललाई भोट माग्न कमेडियन सन्दिप क्षेत्रीले ‘डेढ करोड’ लिएको आरोप !
भरतपुरमा पाँच दलिय गठवन्धनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आमाको नाम लिएर रेणु दाहालको पक्षमा भोट मागेका सन्दिप क्षेत्रीले त्यसका लागि डेढ करोडको डिल गरेको सूचना चुहिएको छ।
सुत्रका अनुसार ६५ लाखका लागि ‘स्पोन्सरसँग कुरा गर्दिनु पर्यो’ भन्दै सन्दिप नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समक्ष पुगेका थिए । उनको कुरा सुनेपछि दाहालले अर्को पक्षसँग फोनमै कुरा गरे। दाहालको फोनपछि अर्को पक्ष डेढ करोडको सम्झौता गर्न तयार भएको थियो।
सन्दिपको काम गरिदिएपछि दाहालले पनि उनलाई प्रस्ताव राखे। दाहालको प्रस्तावमा सहमति गरेर सन्दिप रेणुलाई भोट माग्न भरतपुर पुगेको श्रोतको दावी छ। बैशाख २२ गते गठबन्धनले भरतपुरमा आमसभा आयोजना गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा अप्रत्यासित रुपमा पुगे जसरी सन्दिप क्षेत्री बक्ताको रुपमा पुगेका थिए । सन्दिपको त्यो इन्ट्रिलाई प्राय सवैले शंकाको रुपमा लिएका थिए । सामान्यतयाः कुनै पनि ब्यवसायीक कलाकार विना पैसा कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागि हुदैनन्। नेपालमा कलाकारलाई पैसा तिरेर विभिन्न कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन, महोत्सव आदिमा सहभागी गराउने चलन छ। त्यसमाथि सन्दिप क्षेत्री पैसा बिनाका कार्यक्रमको कुरै सुन्न नमान्ने उनका सहकर्मीहरु नै वताउँछन् ।
तर, उनी भरतपुर पुगेर रेणुको पक्षमा भोट मागेपछि कतिपय कलाकारहरु नै चकित परेका थिए । श्रेत्रीले त्यहाँ गठवन्धनबाट मेयरको उम्मेदवार वनेकी रेणु दाहालको प्रशंसा गर्दै उनका लागि भोट पनि मागे। ‘खासमा म अर्कै कार्यक्रमलाई आएको थिएँ। दिदी (रेनु दाहाल)को कार्यक्रम छ भन्ने थाहा भएपछि मलाई पनि आउँ–आउँ लाग्यो’ भन्दै कुरा सुरु गरेका उनले कार्यक्रममा आउनका लागि पहिले आमालाई सोधेको वताए ।
रेणु दाहालले राम्रो काम गरिरहेकाले त्यहाँ जाँदा फरक पर्दैन भन्दै आमाले भनेपछि आफु कार्यक्रममा आएको वताएका उनले ‘मेरो पितृको आशिष लागोस्’ भन्दै आशिर्वाद पनि दिए । ‘म तपाईंलाई रेनु दिदी भन्छु । रेनु दाहालभन्दा प्रचण्डको नाम आउँछ । प्रचण्डज्यू, ढुक्क हुनुस्, छोरी गज्जबको पाउनुभएको छ’ भन्दै उनले आफ्नो ससुराली चितवन भएको र भरतपुरमा पाँच वर्षको अवधिमा देखिएको परिवर्तनले आफूलाई यहाँसम्म तानेको बताए।
उनले आफु अप्रत्यासित रुपमा आएको पुष्टि गर्न भरपुर प्रयास गरे। दुई मिनेटको मात्रै समय पाएकाले १ मिनेट ५९ सेकेन्डमा आफनो कुरा सिध्याउने वताए। उनी ब्यवसायीक कलाकार हुन। कसरी आफनो कुरा राख्दा सर्वसाधारणले पत्याउँछन् भन्ने उनलाई राम्रो जानकारी छ। त्यसैले आफनो इन्ट्रिलाई उनले अनौपचारीक र रेणुको कामप्रतिको लगावका कारण भएको पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए।– साभार: नेपाल आजबाट
सञ्जुले मर्नुअघि भिडियो सेयर गर्दै फेसबुकमा लेखेकी थिइन् ‘मिसिङ यु लभ’
गगन र विश्व प्रकाशले सुरु गरे पोखरामा यस्तो खेल, नेकपा एसले मेयर पाएपछि बागी उठाउने तयारी !
गठबन्धनको अधिकार कसलाई ? यसो भन्छन् – महामन्त्री गगन थापा